28.11.2013 Waxa Dhejiyay: Maskaxda Farshaxanka
Fikradaha Guriga, Samee naftaada, Shumacyada shumaca iyo laambadaha
Dabka dabiiciga ah wuxuu had iyo jeer ku abuuraa raaxada guriga wuxuuna la jaan qaadi karaa xitaa naqshadaha mustaqbalka. Haddii aadan haysan meel dab lagu shito, dabka wuxuu guriga ku jiri karaa shumacyo ama laambad sida qurxinta gudaha ama qurxinta miiska.
Waxaan kuu soo bandhigi doonnaa farshaxanimo, aad u fudud, laakiin waqti isku mid ah, fikrad aad u qurux badan laambad saliid gacmeed leh. Geedi socodka oo dhan uma baahna waqti badan ama miisaaniyad weyn, rabitaan, dhiirigelin iyo mala awaal ayaa ku filan. Waxaad u baahan tahay weel ama wax kabadan, oo leh qaab quruxsan iyo dabool adag oo ku saabsan birta, dubbe, mashiinka wax lagu riixo ama awl (qashin-qubka iyo xajiinta leh laba gogo 'iyo laba lo' si waxqabad aad u adag), bir, paraffin, ama dareeraha laambada saliidda, qurxinta loogu talagalay doorashada (miro kala duwan iyo hadiyado laga helo dabeecadda).
Marka hore waa inaad samaysataa god dabool leh oo lagu riixayo feedhka. Sida ugu fudud ee tan loo sameeyo ayaa ah in daboolka la geliyo sabuuradda oo aad ku qubto dubbe iyo makiinadaha wax lagu nadiifiyo (awl). Haddii ay jirto cufnaanta birta sare ama bir ballaaran, waxaa lagu talinayaa in lagu sameeyo qalliinkan dillaal oo daboolka waa in si adag loo ilaaliyaa si uusan ugu beddelmin qoditaanka. Haddii aad rabto sax iyo farsamooyin dheeri ah, waxaa fikrad fiican ah inaad ka iibsato xarig leh xarig dibedda ah iyo dhexroor weyn oo ka sameysan dukaanka takhasuska leh si aad ugu riixdid godka. Ka dib ku nadiifi dhaqa iyo xaashiyaha ama xoqitaanka kale. Waad riixaysaa garabka (tan waxaa lagu samayn karaa dhamaadka marka aad furka soo xirto), kaas oo soo afjaraya qaybta farsamada ee shaqada isla markaana kaa tagaya farshaxanimada.
Waxaad diyaarin kartaa weel kasta oo ay ku jiraan iskudhafyo aan dabiici ahayn oo alaabada dabiiciga ah - kena, ubax, laamo, caleemaha, miraha, khudradda, khudradda, geedo yaryar, qolofta iyo waxyaabo kale oo badan. Iyada oo ku xidhan xilliyada ama ciidaha, u tag qaab ahaan. Kirismasyada, kuntooyinka iyo saqafka firidhsan ama laamaha geedka leh waxay ku habboon yihiin qaab-dhismeedka ugu weyn, halka meelaha lagu qurxiyo waxyaabaha ka kooban badda iyo ubaxyada la filayo in badan. Inta lagu jiro farshaxankan, waxaa lagu talinayaa inaad ka tagto qolka qayb ka mid ah xuubkii ku dhex istaagi lahaa gudaha weelka, ama ku dheji garabka laftiisa qurxinta ka dibna ku riix furitaanka furka.
Markii lagu sameeyo qurxinta, ku shub paraffin ama saliid kale oo laambad ah. Tani waxay shardi u tahay gubashada muddada dheer ee hal dhinac, dhinaca kalena waxay ka ilaalin doontaa shaqadaada qalabka dabiiciga ah, dhawrista midabada iyo qurxinta qurxinta. Furaha daboolka waad ku shidaysaa waana midda gaarka ah, laambadda gacanta laga sameeyay ayaa diyaar u ah inay siiso niyadda iyo jaceylka fasaxa iyo guriga kasta.
abaabul, Farshaxanka, gudaha farshaxanka, fikradda farshaxanka, laambadda fanka, qurxinta farshaxanka, laambad gaas ah, décor, qurxinta, qurxinta, qalabka dabiiciga ah, fikradaha, qurxinta fikradaha, fikradaha guriga, fikradaha gudaha, fikradaha kirismaska, fikradaha qurxinta Kirismaska, fikradaha qurxinta, fikradda laambad, fikradda laambad furan, fikradda laambadda, Laambad Kirismaska, Nalalka Kirismaska, Qurxinta Kirismaska, laambad, laambadaha, laambada saliidda, naftaada laambad ka dhig, naftaada samee, gacmeed, laambad, laambad shumac, shumacyo shumacyo, qurxinta, laambad, laambadaha, ubax, fikradaha guriga, nashqadeynta gudaha, alaabta guriga, fikradaha gudaha, naqshadeynta fikradaha, guri casri ah, qurxinta fikradaha, fikradaha fanka
Halkan waxaa ku yaal fikrado ku saabsan gudaha farshaxanka oo leh muraayad rinji ah oo ka socota Art Studio Satto. Cajiib ah ...
Qurxinta miisaska Kirismaska
Ciidda Kirismasku waa ciida masiixiga dhalaalaysa markay qoyska oo dhami isu yimaadaan fasax ...
Biskudka geedka kirismaska
Fikrad qurux badan oo aad u fudud qurxinta beerta. Si aad u sameysid laambad noocaas ah, waxaad ...
Urta gaarka ah ee alaabada kalluumeysiga, habka loo keydiyo loona diyaariyo ...
Sida xaaladaha badankood, marka fikradaha aan caadiga ahayn iyo hal abuurka la dhasho, marka baahida loo qabo ...
Qolka fadhiga casriga ah - fikradaha naqshadeynta gudaha
Fikradaha jira ee loogu talagalay naqshadeynta gudaha ee qolka fadhiga waxay muujinayaan aragti casri ah kuwa ugu ...